Kedu ihe bụ CAN-SPAM Act? | Martech Zone
Kedu ihe bụ CAN-SPAM Act?
United States ụkpụrụ ekpuchi azụmahịa ozi email ozi na-usoro 2003 n'okpuru Federal Trade Commission nke CAN-SPAM Act. Ezie na ọ karịrị afọ iri… M ka na-emeghe igbe mbata m kwa ụbọchị na-achọghị na email na nwere ma ụgha ozi na-enweghị usoro iji pụọ. Amaghị m na otu iwu si dị irè na-enwe ihe iyi egwu nke ihe ruru $ 16,000 maka iwu ọ bụla.
N'ụzọ na-akpali mmasị, Iwu CAN-SPAM achọghị ikike iziga ozi email iwu izi ozi azụmahịa nke mba ọzọ eguzobewo. Ihe ọ chọrọ chọrọ bụ na onye nnata ahụ nwere ikike ka ị kwụsị iziga ha ozi. A maara nke a dị ka usoro nwepu aha, nke a na-enye site na njikọ wepu aha na-esonye n'ụkwụ email.
a Nduzi ndi mbido na iwu CAN-SPAM site na EverCloud ga-enye gị ozi niile ị chọrọ ịma iji hụ na ị na-erubere iwu isi.
Isi ihe choro nke iwu CAN-SPAM:
Ejila ozi isi okwu ụgha ma ọ bụ na-eduhie eduhie. Gị “Site na,” “Iji,” “Zaghachi-Na,” na ịghagharị ozi - gụnyere ihe ọ pụtara na ngalaba aha na adreesị ozi-e - ga-abụ ihe ziri ezi ma mata onye ma ọ bụ azụmahịa onye malitere ozi.
Ejila usoro okwu aghụghọ. Isi okwu a gha egosiputa ihe ederede di na ya.
Mata ozi dị ka ad. Iwu nyere gị ọtụtụ ntụpụrụ ị ga - esi mee nke a, mana ị ga - ekpughere nke ọma na nke ọma na ozi gị bụ mgbasa ozi.
Gwa ndị nnata ebe ị nọ. Ozi gị ga-enwerịrị adreesị ozi-e dị adị gị. Nke a nwere ike ịbụ adreesị n'okporo ámá gị ugbu a, igbe ọrụ nzipu ozi ị debanyere aha na US Postal Service, ma ọ bụ igbe akwụkwọ ozi nkeonwe ị debanyere aha gị na ụlọ ọrụ na-anata ozi azụmahịa guzosie ike n'okpuru iwu Nzipu Ozi.
Gwa ndị nnata otu esi pụọ na ịnweta ozi email n’ọdịnihu gị. Ozi gị ga-enwerịrị nkọwa doro anya ma doo anya banyere otu onye nnata nwere ike isi pụọ na ịnweta email gị n'ọdịnihu. Dere ọkwa a n'ụzọ dịịrị onye nkịtị mfe nghọta, ịgụ, na ịghọta. Okike iji ụdị ụdị, agba, na ọnọdụ mee ihe nwere ike ịkọwapụta nke ọma. Nye adreesị ozi-e nloghachi ma ọ bụ ụzọ ọzọ dị mfe nke ịntanetị iji nye ndị mmadụ ohere ịgwa gị ihe ha chọrọ. You nwere ike ịmepụta menu iji nye onye nnata ohere ịpụ na ụdị ozi ụfọdụ, mana ị ga-etinyerịrị nhọrọ iji kwụsị ozi azụmahịa niile n'aka gị. Gbaa mbọ hụ na nzacha spam anaghị egbochi arịrịọ nwepu aha ndị a.
Sọpụrụ arịrịọ ịpụpụ ozugbo. Usoro ọpụpụ ọ bụla ị na-enye ga-enwe ike ịhazi arịrịọ ịpụ apụ ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 30 mgbe izipụchara ozi gị. Ga-asọpụrụ arịrịọ nwepu aha nke nnata n'ime ụbọchị azụmahịa 10. Nweghị ike ịkwụ ụgwọ ego, chọọ ka onye nnata ahụ nye gị ozi njirimara ọ bụla karịrị adreesị ozi-e, ma ọ bụ mee ka onye nata ya na-eme ihe ọ bụla ọzọ karịa izipu ozi nzaghachi ma ọ bụ ịga otu peeji na weebụsaịtị Weebụ dị ka ọnọdụ maka ịsọpụrụ Nwepu aha Ozugbo ndị mmadụ gwara gị na ha achọghị ịnata ozi ndị ọzọ n'aka gị, ịnweghị ike ire ma ọ bụ bufee adreesị email ha, ọbụlagodi n'ụdị ndepụta nzipu ozi. Nanị ihe dị iche bụ na ị nwere ike ịnyefe adreesị na ụlọ ọrụ ị goro ọrụ iji nyere gị aka irube isi na iwu CAN-SPAM.
Nyochaa ihe ndị ọzọ na-eme n'ihi gị. Iwu ahụ mere ka o doo anya na ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị were ụlọ ọrụ ọzọ ọrụ iji zụọ ahịa email gị, ịnweghị ike iwepu ọrụ iwu gị ịgbaso iwu. Ma ụlọ ọrụ ndị ọrụ ha na-akwalite na ozi ahụ na ụlọ ọrụ na-eziga ozi ahụ n'ezie nwere ike ịbụ ndị iwu kwadoro.
Gbaa mbọ hụ na ị rube isi n'iwu CAN-SPAM bụ ihe mbụ ị ga - eme iji nweta ozi ịntanetị gị site na nzacha email na igbe nnabata gị. Nnabata na CAN-SPAM apụtaghị na email gị ga-eme ya na igbe mbata, ọ bụ ezie! Enwere ike ịdebanye aha gị yana igbochi, ma ọ bụ zigara gị na folda junk dabere na nnapụta gị, aha gị na ntinye igbe gị. Ga-achọ ọrụ nke atọ 250ok maka nke ahụ!
Tags: nwere ike spam emenwere ike-spamizi ozi ahiaụlọ ọrụ gọọmentị etitiftchọrọ ọpụpụspam nzachaIwu spamozi ịntanetị azụmahịaọrụ nzipu oziKedu ihe omume-spam na-eme
Mpempe akwụkwọ ntụpọ dị egwu na njigide onye eji ngwa ngwa
Ihe ndi ahia choro ima banyere ichebe ihe omuma nke ihe omuma